Ngena kumzi-mveliso-weYangzhou qiangjing iimpahla zemidlalo Co, Ltd.
Ukuthintela i-UV / ukubanda
I-band Resistance band
Ukulungisa isimo sentloko
Umva kunye noLumbar
Umva kunye neendevu
Inkxaso yeTigh kunye nethole
Yila iqela lobugcisa
Uvavanyo lwekhowudi esemgangathweni
Umzi-mveliso wethu uthenga iilaphu zabakhuseli bezemidlalo. Itekhnoloji iya kuba neemfuno ezahlukileyo zokukhusela abakhuseli ngokwemidlalo eyahlukeneyo. Ikhethwe ngokukhethekileyo ngokuxhomekeka koxinzelelo lwabakhuseli kumalungu kunye nezihlunu. Umthengi kufuneka athenge ngokungqongqo iiparameter ezithile.
Zintathu iindidi zokukhusela ezemidlalo kumzi-mveliso wethu: abakhuseli ababethelelwe, abakhuseli beerhasi be-NEOPRENE, abakhuseli bebhandeji ye-elastic.
Umdlalo oqhelekileyo wokuzikhusela kwimidlalo yasekhaya / yokuzivocavoca
Izixhobo zihlala zingumqhaphu wekotoni okanye umsonto odityanisiweyo, olongelwe ngomatshini wokujikeleza wokucheba, kwaye emva koko ubambe umlo. Iigiya zokhuselo ezibiyelweyo zihlala zilungele izixhobo ezikhuselayo zemidlalo kwaye nokuzigcina zifudumele.
Izixhobo zemidlalo eziphezulu
I-NEOPRENE sisixhobo esikhuselayo esifanelekileyo. Ilaphu linokuqina okuqaqambileyo kunye nokuphefumla okuhle. Inokubonelela ngoxinzelelo olufanelekileyo kumalungu kunye nezihlunu zemisipha. Inokhuselo olufanelekileyo lokusebenza kwaye ilungele ezemidlalo eziphezulu.
Esona sixhobo silungileyo kwimidlalo yangaphandle
Umkhuseli we-bandage onqabileyo wenziwe ngemisonto yekotoni yepleyiti kunye neebhanti zerabha, ezinqunywe kubude obahlukeneyo ngokweemfuno zamalungu ahlukeneyo omzimba. I-ballet enkulu yokugquma kunye nokuthunga isetyenziselwa ukulungisa umkhuseli.
Umkhuseli webhandeji kulula ukuba umoya uvuthuze, unakho ukuhlengahlengisa uxinzelelo ngokukhululekileyo, kwaye unemvume elungileyo yomoya. Ingasetyenziselwa ukukhusela ezemidlalo okanye njengebhandeji engxamisekileyo. Izixhobo ezilungileyo zemidlalo yangaphandle。
Zonke iimveliso zomzi-mveliso wethu zilawulwa ngokungqongqo ngokwemigangatho yaseYurophu neyaseMelika, kwaye zihambelana ngokuhambelana nemigangatho yehlabathi yokukhuseleka kwezemidlalo.
Iimveliso zokukhusela ezona zixhobo zikhuselayo: isinqe, isinqe, isundu, idolo kunye nomqengqele kunye nezinye izixhobo zokhuselo: akukho ntlungu, ubude buzinzileyo, indawo ekhuselayo, amandla okuzibopha, amandla efuthe / ukusebenza, isatifikethi semveliso yokhuselo kwezemidlalo, ilebhile yokumakisha / ilebhile yokuLumkisa / Incwadi yokusebenzisa ...
Zonke iimveliso kwigumbi leSampulu zivavanywa ngokungqongqo kwakhona xa ziphuma kumzi-mveliso.
Iingcebiso - Iimveliso ezishushu - Imephu